မင်းဘူးမြို့ ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဆက်လက်မြင့်တက် ~ Myaylatt Daily.
မင်းဘူး စက်တင်ဘာ ၁၁
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မင်းဘူးမြို့တွင် ဧရာဝတီမြစ်ရေ ဆက်လက်မြင့်တက်လျက်ရှိရာ မြစ်ကမ်းပါးနေ ရပ်ကွက်များမှ လူနေအိမ်များနှင့် ကျေးရွာများအတွင်း မြစ်ရေများ ၀င်ရောက်လျက်ရှိသည်။
မင်းဘူးမြို့ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်ထောင်စု(၄)စုမှာ ရေဘေးကင်းလွှတ်ရာ အ.ထ.က(၁) အားကစား ကွင်းအတွင်းသို့ ယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ကျန်ရှိသည့် အိမ်ထောင်စုများ ပြောင်းရွှေ့နိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များမှ လိုက်လံကြည့်ရှု ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေလျက်ရှိသည်။
မင်းဘူးမြို့နယ် သနပ္ပင်စုရွာ၊ကျောင်းကုန်းရွာ၊ငွေသောင်ကျွန်းရွာ၊နိဗ္ဗာန်ကျွန်းရွာ၊ပဒေသာကျွန်းရွာ၊ ပေါက်ငူရွာ၊ပေါက်လေးပင်ကျေးရွာ၊မန်းကျိုးရွာ၊ထုံးမကျီးရွာ၊ရွာသစ်ကုန်းရွာနှင့် ဆယ်ရွာတို့တွင် မြစ်ရေများဝင် ရောက်လျက်ရှိရာ လူများနှင့် တိရစ္ဆာန်များ ရေဘေးကင်းလွှတ်ရာ မန်းရေနံမြေနှင့် နီးစပ်ရာ ကုန်းမြင့်ပိုင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ယာယီပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒဦးစီးဌာန၏ စက်တင်ဘာလ(၁၁)ရက်နေ့ နံနက်(၆)နာရီ မြစ်ရေတိုင်ထွာချက် အရ ဧရာဝတီမြစ်ရေသည် (၁၆၆၅)စင်တီမီတာသို့ရောက်ရှိလျက်ရှိကြောင်းနှင့် စိုးရိမ်ရေအမှတ်(၁၇၀၀)စင်တီ မီတာသို့ မရောက်ရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
Kaung Khant Mhuue added2new photos.
မကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့ အမှတ် ၁ ၂ ၃ ၄ ရပ်ကွက်များမှာဒုတိယ အကြိမ်ရေကြီမှုံကြူံတွေ နေ